बढ्यो सुनको भाउ , तोलाको कति पुग्यो हेर्नुहोस ! | Citizen FM 97.5 Mhz
६ साउन , काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (मंगलबार) सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारको लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । सोमबार तोलाको ९२ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुनको भाउ पनि तोलामा ३९५ रुपैयाँले बढेर ९२ हजार २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदीको भाउ एकै दिन तोलामा ४० रुपैयाँले बढेको छ । महासंघले आज (मंगलबार) का लागि तोलाको एक हजार ४० रुपैयाँ तोकेको छ । चाँदी सोमबार तोलाको हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अविरल वर्षा नरोकिदा मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित, कहाँ कहाँ छ खतरा ?
आज पनि ८०० ले सस्तियो सुनको भाउ
प्रभु इन्स्योरेन्सको शेयर खरिदमा अत्याधिक माग, तर छैन विक्रेता